1 UPawulu,+ ongumphostoli+ ongamiswanga ngabantu noma ngomuntu, kodwa ngoJesu Kristu+ nangoNkulunkulu uYise,+ owamvusa kwabafileyo,+ 2 nabo bonke abazalwane abanami,+ kini mabandla aseGalathiya:+ 3 Kwangathi ningaba nomusa ongafanelwe nokuthula+ okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. 4 Yazinikela ngenxa yezono zethu+ ukuze isikhulule kulesi simiso sezinto esibi samanje+ ngokwentando+ kaNkulunkulu noBaba wethu, 5 okumelwe inkazimulo ibe kuye kuze kube phakade naphakade.+ Amen. 6 Ngiyamangala ukuthi nisuswa masinyane kangaka kuLowo+ owanibiza ngomusa ongafanelwe+ kaKristu niyiswe kolunye uhlobo lwezindaba ezinhle.+ 7 Kodwa akulona olunye; kuphela ukuthi kukhona abathile abanibangela inkathazo+ futhi abafuna ukuphendukezela izindaba ezinhle mayelana noKristu.+ 8 Nokho, ngisho noma thina noma ingelosi evela ezulwini besingamemezela kini okungalé kwalokho esakumemezela kini njengezindaba ezinhle, makaqalekiswe lowo.+ 9 Njengoba sishilo ngenhla, namanje ngiyaphinda ngiyasho, Noma ubani omemezela kini okungalé kwalokho enakwamukela,+ makaqalekiswe. 10 Eqinisweni, ingabe manje ngizama ukuthonya abantu noma uNkulunkulu? Noma ingabe ngifuna ukujabulisa abantu?+ Ukube bengisajabulisa abantu,+ ngabe angiyona inceku kaKristu.+ 11 Ngoba ngiyanazisa, bazalwane, ukuthi izindaba ezinhle ezamenyezelwa yimi njengezindaba ezinhle azikona okuthile okuvela kubantu;+ 12 ngoba nami angizange ngizamukele kumuntu, noma ngizifundiswe, kodwa ngazambulelwa uJesu Kristu.+ 13 Yebo, nezwa ngokuziphatha kwami ngaphambili enkolweni yobuJuda,+ ukuthi ngaqhubeka ngishushisa+ ibandla likaNkulunkulu futhi ngilichitha kwaze kwaba seqophelweni lokweqisa,+ 14 futhi ngangenza intuthuko enkulu enkolweni yobuJuda kunabaningi kontanga yami ohlangeni lwakithi,+ njengoba ngangiwashisekela kakhulu impela+ amasiko+ obaba. 15 Kodwa lapho uNkulunkulu, owangihlukanisa nesibeletho sikamama futhi wangibiza+ ngomusa wakhe ongafanelwe,+ ekucabangela njengokuhle 16 ukuba ambule iNdodana yakhe ngami,+ ukuze ngimemezele ezizweni izindaba ezinhle mayelana nayo,+ angizange ngibe nomhlangano nenyama negazi+ ngaso leso sikhathi. 17 Futhi angizange ngikhuphukele eJerusalema kulabo ababengabaphostoli ngaphambi kwami,+ kodwa ngaya e-Arabhiya, ngase ngiphinde ngibuyela eDamaseku.+ 18 Khona-ke, eminyakeni emithathu kamuva ngakhuphukela eJerusalema+ ukuze ngihambele uKhefase,+ futhi ngahlala naye izinsuku eziyishumi nanhlanu. 19 Kodwa akekho omunye kubaphostoli engambona, kuphela uJakobe+ umfowabo+ weNkosi. 20 Ngokuqondene nezinto enginilobela zona, bhekani! emehlweni kaNkulunkulu, angiqambi manga.+ 21 Ngemva kwalokho ngaya+ ezifundeni zaseSiriya naseKhilikhiya. 22 Kodwa ngangingaziwa ngobuso emabandleni aseJudiya ayemunye noKristu;+ 23 ayevame nje kuphela ukuzwa kuthiwa: “Umuntu owayesishushisa ngaphambili+ manje usememezela izindaba ezinhle mayelana nokholo ayeluchitha ngaphambili.”+ 24 Ngakho aqala ukukhazimulisa+ uNkulunkulu ngenxa yami.